Serasera.org - Blog: mars 2010
Youtube amin'ny hafatra sy eritreritra mandalo
Toa izao no fametrahana video eto amin'ny eritreritra mandalo. Hatramin'izao aloha dia mbola Youtube ihany no azo apetraka fa mbola hatsaraina amin'ny manaraka.
Raha te hametraka video Youtube dia jereo ilay lien omen'ny Youtube. Ohatra hoehttp://www.youtube.com/watch?v=8kxC8CzwIOY dia alaivo ilay code aorian'ny v= izany hoe ilay8kxC8CzwIOY eto amin'ny ohatra dia ataovy ao anatin'ny [youtube] sy [/youtube] tsy asiana elanelana. Izany hoe toa izao [youtube]8kxC8CzwIOY[youtube]
Dia toa izao no hiseho eo amin'ny eritreritra mandalo rehefa sokafana.
Publié par Eugene Heriniaina à 3/12/2010 10:18:00 AM 1 commentaire: Liens vers cet article
Libellés : Namana
Publié par Eugene Heriniaina à 3/02/2010 09:18:00 AM 2 commentaires: Liens vers cet article